Ikhaya lakho eLa Antigua - I-Airbnb
Ikhaya lakho eLa Antigua
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Tomas
U-Tomas Ungumbungazi ovelele
Ifulethi lakho e-Antigua liseduze neCentral Park (4-1/2) amabhlogo, izitolo nezindawo zokudlela, ibhulokhi elilodwa emakethe. Isakhiwo sithule. Siyigcina ihlanzekile.
Ifulethi elingu-85 m2, kanye nethala elingu-40 m2 elibuka phezu kwengadi enemithombo. Nginokubukezwa okuhle kwamafulethi angu-4 kulesi sakhiwo ku-Airbnb. Nginababili futhi ngokuqasha isikhathi eside futhi ngihlala ngemuva.
Siqashe ku-Airbnb emhlabeni wonke futhi abanye ababungazi basenze sazizwa sisekhaya ngempela. Ngihlela ukukwenzela okufanayo lapha.
1. Ifulethi ngelakho kuphela. Akekho ohlala kuyo noma ogcina izinto zakhe; eyezivakashi ze-Airnb.com KUPHELA.
2. Sengeze usuku olulodwa ngaphambi nangemuva kokuqasha ngakunye ukuze usinikeze isikhathi esanele sokuhlanza ngokujulile ngaphambi kokuba ufike. Ngeke sisakuvumela ukuphuma ekuseni futhi ungene kamuva ngalo lolo suku. Lapho ufika, izohlanzeka ngokungenabala kuwe, nebhodlela elamukelekile lewayini, izimbali ezintsha kanye "nama-champurradas" aseGuatemala.
3. Ukuhlala kwenye yezindlu zethu ezi-4 ze-Airbnb.com kuyindlela enhle yokuvakashela i-Antigua nokuzijwayeza ukuqhelelana nabantu ... ifulethi lingelakho futhi ngokungafani nasehhotela, uzohlangana nabantu abambalwa kakhulu lapha.
Siseduze neParque Central, enkabeni ye-Antigua - 4-1/2 blocks. I-La Bodegona, isitolo esikhulu esisedolobheni singamabhulokhi angu-1- 1/2 futhi imakethe yase-Antigua yemifino, izithelo nakho konke kungemuva kwendlu. I-"Mercado de Artesanias", imakethe yezandla, ingamabhuloki ama-2 eningizimu.
Ngikhangisa amafulethi amabili angaphezulu njengokuthi "anokubukwa kwezintaba-mlilo", ngoba anazo. Kodwa-ke, asizange sikhiye iminyango yesitezi sesi-2 futhi wamukelekile ukuya ophahleni futhi ubone izintaba-mlilo ezintathu nokubukwa kwe-Antigua.
Amafulethi ahlangene azungeze igceke eliphakathi nemithombo, izihlahla, izimbali. Izivakashi ze-Airbnb ezingaphezu kuka-300 ziye zaphawula ngendlela okuthule ngayo lapha, nakuba ungena usuka emgwaqeni ophithizelayo wezentengiselwano. Ngaleso sizathu, amafulethi AKUYONA ezingane ezingaphansi kweminyaka engu-2 futhi AKUSIZO ezabantwana abangaphansi kweminyaka engu-12. Kudingeka sithule le ndawo. Uzokwazisa lokho ngesikhathi sokuvakasha kwakho lapha.
Siyakwamukela endlini yethu e-Antigua. Leli yidolobha elixube kakhulu. Ngiyiqhathanisa neManhattan encane. Lapho, eManhattan, imigwaqo iya eMpumalanga-Ntshonalanga nalapha futhi. Imigwaqo eManhattan iya eNyakatho-Ningizimu, e-Antigua futhi. E-Manhattan, i-Avenue ehamba phambili ingeyesi-5, iqhutshwa yi-Central Park futhi inezitolo ezinkulu. Ngokufanayo lapha e-Antigua, futhi i-5th Avenue nayo ine-Arch edumile phezu kwayo. I-Manhattan igcwele i-cosmopolitan cuisine, i-Antigua ingase ibe yincane, kodwa kuyafana, ukudla kumnandi. Phakathi nesonto, kunabantu abangu-45,000 futhi ngezimpelasonto bangu-100,000, abagcina izindawo zokudlela zisebhizinisini. Isimo sezulu sethu singcono kakhulu kunanoma yikuphi, iNtwasahlobo unyaka wonke.
Futhi unemibono yezintaba-mlilo ezintathu phezu kwe-Antigua. Mina nomkami siye sasebenzisa amafulethi e-Airbnb e-Agrigento, Amsterdam, Austin (5x), Bayeux, Berlin, Boston, Budapest, Bushmills, Buenos Aires, Collioure, Chicago, Copenhagen, Covington, den Haag, Galway, Giverny, Liege, Ljubjana, London, Lucca, Madrid, Mexico City (4x), New Orleans, Orlando, Oslo, Palermo, Paris (4x), Port Antonio (Jamaica), Rome (2x), Runaway Bay (Jamaica), San Cristobal de las Casas, Sankt Goarshausen, Siena, Siracusa, Strasbourg, Taormina, Trieste, Valetta, Vancouver, Venice, Vienna, Washington DC (2x) nezinye izindawo ezimbalwa. Sibhekise amabombo eChicago, e-Orlando nase-Austin futhi. Wonke amafulethi ayemahle, elilodwa kuphela elalilibi. Kwezinye, umninikhaya wethu usenze sazizwa sisekhaya ngempela futhi yilokho esizozama ukukwenzela khona lapha e-Antigua.
Izindawo zokudlela kuwo wonke amazinga amanani, kusukela kwezishibhile ukuya kweziwubukhazikhazi kakhulu zikhona yonke indawo. Nginamanye amafulethi amathathu e-Airbnb esakhiweni namabili anabaqashi besikhathi eside. Sihlanza izindawo zomphakathi, amaphasishi nezitezi, nsuku zonke.
Siphinde sihlanze endlini yakho ngaphambi kokufika kwakho bese kuthi njalo ngoMsombuluko.
Nginamanye amafulethi amathathu atholakalayo esakhiweni.
4.98 · 85 okushiwo abanye
I-Alameda Santa Lucia iwumgwaqo omkhulu wezohwebo, onezitolo, iposi, isitolo esikhulu esingu-1-1/2 amabhulokhi kude, kanye nemakethe ngemuva. Kokubili imakethe yezithelo, imifino nezingubo, kanye ne "Mercado de Artesanias" yezikhumbuzo nezindwangu ezimibalabala zaseGuatemala, izinto, imidwebo. Izindawo zokudlela ezisemgwaqweni KULUNGILE, kodwa ngamabhulokhi angu-3-4 kunenqwaba yezindawo zokudlela zazo zonke izinhlobo kuwo wonke amazinga amanani.
Ngihlala endlini yami ngokushesha ngemuva kwamafulethi. Ngise-Antigua izinsuku ezimbalwa ngeviki, ngezinye izinsuku ngiseDolobheni laseGuatemala, kodwa ngizoqinisekisa ukuthi ngilapha ukuze ngikwemukele futhi ngikunike amathiphu okuthi ungahlala kanjani e-Antigua.
Ngihlala endlini yami ngokushesha ngemuva kwamafulethi. Ngise-Antigua izinsuku ezimbalwa ngeviki, ngezinye izinsuku ngiseDolobheni laseGuatemala, kodwa ngizoqinisekisa ukuthi ngila…
UTomas Ungumbungazi ovelele